Fankalazana ny Dihin'ny varika maneran-tany 2018 - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Fankalazana ny Dihin’ny varika maneran-tany 2018
Manentana antsika rehetra mpikambana eto anivon’ny LCN sy ireo rehetra izay tia varika mba hiara hankalaza aminay ny dihin’ny varika maneran-tany amin’ity taona 2018 ity. Ankalazaina eto Madagasikara sy maneran-tany mandritra ny volana oktobra ity hetsika ity. Karakarain’ny GERP ny dihin’ny varika maneran-tany eto Antananarivo. Araho eto amin’ity rohy facebook ity ny andinidiny mikasika izany.
Natao ho fanentanana anisan’ny lehibe indrindra ny amin’ny fiarovana ny varika ny hetsika « dihin’ny varika maneran-tany ». Ary koa, ampatsiahivana antsika fa ny varika : harem-pirenena, namana ka tokony arovana. Ho antsika rehetra ny nanaovana ny dihin’ny varika maneran-tany : ho an’ireo tia varika, ireo mpiaro ny zava-boajanahary, ireo mpikaroka, ireo mpianatra, ireo artista, ireo ankizy, ireo ray aman-dreny, fa ho ANAO indrindra koa!
Ny mombamomba ny dihin’ny varika maneran-tany
Ny tantaran’ny niandohan’io fankalazana io
Ny salotra namboarina tamin’ny taona 2015
Ny salotra namboarina tamin’ny taona 2016
Ny salotra namboarina tamin’ny taona 2017
Ny dihin’ny varika maneran-tany sy ny sary namboarina manokana amin’izany
Tamin’ity taona ity, ny sary dia namboarin’i Lynne Venart izay mpiasa an-tsitrapo eto amin’ny Lemur Conservation Network ary i Lauren Petronaci avy amin’ny Lemur Love.
Entaninao ianao hampiasa ireo sary ireo, hizara eny amin’ny tambazotra sosialy ho fanentanana ny amin’ity hetsika ity. Fa afaka mampiasa ny logo an’ny fikambanana misy anao ihany koa ianao.
Ny salotra na tee-shirt namboarina tamin’ity taona 2018 ity
Jereo fa maro ireo loko sy ireo sary natao amin’ireto tee-shirt ireto.
Ny vola azo amin’ny famarotana izy ireo any ivelany dia omena manontolo hoan’ny mpikambana LCN iray miaro ireo karazana sifaka ahiana ho lany tamingana. Safidiana ankitsapaka ny mpikambana ka araho tsy tapaka ny tranonk’ala ny LCN ahafantaranao izay hahazo ny fanomezana.
Entano ny namana eny amin’ny tambazotra sosialy!
Zarao ny fitiavanao varika eny amin’ny amin’ny tambazotra sosialy.
* Ampatsiahivina isika fa tsy mety ary tena entanina mafy ny tsy fizarana sary miaraka amin’ny varika na horonan-tsary mampiseho fifandraisan’ny olona sy ny varika. Satria na dia mahafinaritra no mijery azy ireny dia mampirisika ny fananàna varika ho biby fiompy izany, izay tena voararà ny lalàna. Indro ny rohy manazava izany bebe kokoa.
Zarao ny sarinao misalotra akanjo miendrika varika na misy sary varika ary asio ny hashtag hoe #WorldLemurDay and #LetsSaveLemurs- Ho zarainay eny amin’ny pejy Facebook ireny sary ireny!
Eny amin’ny facebook, ovao ny « photo de profil » ho sary mamantatra ny dihin’ny varika maneran-tany na ny varika tianao indrindra. Ovao ihany koa « ny photo de couverture » ka asio ny sary miendrika hoe « tiako ny varika ».
Mandefa sarin’ny varika tianao na hiasanao amin’ny fikambanana misy anao.
Entano ny namana hiaro ny varika ka hanampy ireo fikambanana miaro azy ireo.
Ampiasaho ny hasthag hoe #WorldLemurDay na #LetsSaveLemurs eny amin’ny tambazotra misy anao.